Kufamba Kumusoro uye Kudzika Masitepisi neCane
apo kushandisa tsvimbo, mabasa akareruka anogona kuzotyisa kuita. Iwe ungangove wakachinjira kumudonzvo nekuda kwekuomerwa nehuremu. Kana kufamba kukava kwakaoma, vanhu vazhinji vanoshandukira kukeni kuti vabatsirwe. Kunyangwe ringave gumbo rimwe chete kana gumbo gumbo, tsvimbo dzinobatsira zvakanyanya kuburikidza nemhando dzese dzenzira.
Kune rimwe dambudziko asi zvakadaro rinoramba rakaomera vamwe kunyangwe mushure mekushandura mudonzvo.
Kukwira Kumusoro Masitepisi Nekwayera Inofamba
Rangarira kuti kana uchifamba uchikwira masitepisi, kugara uchibata njanji yeruoko neruoko rumwe chete. Unofanira kuva kushandisa rumwe ruoko rwako kubata tsvimbo. Kungoti nekuti paine masimbi ekubata kumatanho, hazvireve kuti zvakachengeteka kuva wakazara pairi.
Ita shuwa yekubata tsvimbo yako neruoko rwako rwakasimba uye bata ruoko rwesimbi neimwe. Kana nekuda kwechimwe chikonzero handrail yakaiswa padivi reruoko rwako rwusina kusimba, usayedze kubhadhara nekuyedza nzira yekunyepedzera. Ingo shandura kwenguva pfupi tsvimbo yacho mune rumwe ruoko rwako kunyangwe hazvo isiri ruoko rwako rwekutanga.
kudzivisa gumo Ndichiri Kukwira Masitepisi
Paunenge wagadzirira kutanga kukwira pamatanho, simudza gumbo rako rakasimba kwazvo kumusoro nhanho yekutanga uye sundira pasi pamudonzvo kutamisa gumbo rako risina kusimba kuti riuye naro padanho rakafanana negumbo rako rekutanga. Mushure meizvozvo, tora tsvimbo yako idzokere padanho rakaenzana nemakumbo ako. Zvino enderera nhanho dzakanyorwa pamusoro kusvikira iwe wasvika pamusoro pematanho.
Zvakareruka, kufamba uchidzika nemasitepisi neiyo tsvimbo kuri nyore sekudzorera nhanho dzawakatora kana uchikwira. Iwe unongofanirwa kurangarira kuti kufamba uchidzika masitepisi kunogona kuve nenjodzi zvishoma nekuti kukwira nzira kunogona kukonzera kudonha uko kunotungamira kudonha pasi pamatanho. Aya ndiwo maitiro ekukuvara kwakawanda kunoitika.
Maitiro akafanana anoshandiswa kukwira nekudzika masitepisi ane tsvimbo anogona zvakare kushandiswa kune yakakomberedzwa.